ပြည်တွင်း ကြွေးမြီလက်ကျန် ကျပ်ဘီလီယံ နှစ်သောင်းကျော်ရှိ - Yangon Media Group
ပြည်တွင်း ကြွေးမြီလက်ကျန် ကျပ်ဘီလီယံ နှစ်သောင်းကျော်ရှိ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်ထိ ပြည်တွင်းကြွေးမြီ လက်ကျန်စုစုပေါင်း ကျပ်ဘီလီယံနှစ်သောင်းကျော်ရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ပေးပို့သော ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် အစိုးရ၏ကြွေးမြီဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ”၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ် ၃၁ ရက်အထိ ပြည်တွင်း ကြွေးမြီလက်ကျန် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ခွဲခြားတင်ပြရမယ်ဆို လျှင် စုစုပေါင်း ကျပ် ၂ဝ၇၂၄ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ရှိပါတယ်။ အစိုးရငွေတိုက် စာချုပ်လက်မှတ်များနှင့် ယူထားတဲ့ ကြွေးမြီများ ကျပ် ၄ဝ၅၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ်နှင့် ရယူထားသော ပြည်တွင်းကြွေးမြီက ကျပ် ၂၃၅၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ၊ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ အစိုးရ ငွေတိုက်လက်မှတ်များကို ရောင်းချ၍ ငွေချေးယူထားခြင်းကတော့ ကျပ် ၁၄၃၂၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ၊ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက နှစ်အဆက်ဆက် ကျန် နေတဲ့ ပြည်တွင်းကြွေးမြီများ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ချေးငွေထုတ်ယူမှုနှင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု အခြေအနေများအရ နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းအလိုက်တွင် ကမ္ဘာဘဏ်ထံမှ ချေးငွေ အများဆုံးထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ပြီး ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုတွင် တရုတ်နိုင်ငံထံသို့ အများဆုံး ပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့အစည်းအလိုက်တွင် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ချေးငွေ အများဆုံး ထုတ်ယူခဲ့ပြီး ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုတွင်လည်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
”၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ချေးငွေပေးအပ်သည့် နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်း ရှစ်ခုထံမှ ချေးငွေစီမံကိန်း ၁၅ ခုအတွက် ချေးငွေစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သော ချေးငွေများမှာ ပမာဏအားဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၁၇ ဒသမ ၃၉၉ သန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ ဂျိုက်ကာမှ ချေးငွေက အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် ချေးငွေတွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာနမှ အများဆုံးရယူခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ကဏ္ဍအလိုက် ပြည်ပချေးငွေ ရယူမှုတွင်လည်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးမှ အများဆုံးဖြစ်သည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အပ်ငွေစာရင်းတွင် လိုငွေဖြစ်ပေါ်ပါက ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်သို့ အစိုးရငွေတိုက်လက်မှတ် ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ၊ အစိုးရငွေတိုက် လက်မှတ်များ လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ၊ အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များ လေလံစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းရာခိုင်နှုန်း ၄ဝ လျာထား သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အပ် ငွေစာရင်း၏ လိုငွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်သို့ ငွေတိုက်လက် မှတ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့် အသားတင် ဖြည့်ဆည်းရခြင်းသည် စုစုပေါင်းအသားတင် ဖြည့်ဆည်းမှုပမာဏ၏ ၂၄ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်၍ လျာထားချက် ဖြစ်သည့် ရာခိုင်နှုန်း ၃ဝ အောက်တွင်ရှိကြောင်း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လျာထားချက်အောက် လျော့နည်း၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
''ပထမဦးဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အခွေမှာ လိုအပ်ချက်၊ အားနည်းချက်တွေ ပါသွားတယ်'' အဆိုတော် Mary
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရှိ ကြာမှောက် ကြာလန်မှ ရွှေစင်ပြား ကိုးပြားကို စစ်ဆေးရာ မူလရွှေပါဝင်နှုန်းထ??
မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာကလပ်မှ စာပေပညာရှင်ငါးဦးအား ပူဇော်ကန်တော့
တောင်တရုတ် ပင်လယ်အငြင်းပွားမှုတွင် အင်အား မသုံးရန် တရုတ်နှင့် dဖိလစ်ပိုင် တို့ သဘောတူ
ဒုံးကျည်များ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်မည် ဟု အီရန် သမ္မတပြောကြား
တစ်ချိန်က ကျေးဇူးတော်နေ့မှာ ကြက်ဆင်ဝယ်မစားနိုင်တဲ့အထိ ဆင်းရဲခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆိုတဲ့ မင်းသား T
သရုပ်ဆောင်ယွန်းဝတီလွင်မိုးနှင့် မောင်ထက်ဦးလှိုင်တို့ မင်္ဂလာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနှင့် ညစာစာ??